Archive du 20171213
Fampihavanam-pirenena Tsy mahomby noho ny politikan’ny ady seza…
Olana polika no antony tsy mampahomby ny fampihavanam-pirenena, araka ny fakan-kevitra tamin’ny mpitandrina Roger Randriamorasata. Ny zava-nisy dia nampidirana ny politika politisianina: fitadiavan-tseza, fitadiavan-toerana, fanilihana ny hafa,… ilay fampihavanam-pirenena.
Vahoaka Malagasy Manantena an’i Dada
Nahatonga solontena hanotrona ny faha 68 taonan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny Tanjombato avokoa omaly ny solontenan’ireo faritra 22 eto Madagasikara. Nitamberina omaly indray ny hafanam-pon’ireo malagasy niandrandra fiovana tamin’ny taona 2009. Mbola manantena an’i Dada ny vahoaka malagasy.
Lalàm-pifidianana “Tsy voadiniky ny parlemanta amin’ity taona ity intsony”
Tsy mbola tonga eny amin’ny antenimierandoholona hatry ny omaly 12 desambra ny volavolan-dalàna momba ny lalàm-pifidianana avy any amin’ny governemanta, ary tsy mbola am-pelatanan’ireo depiote
Fetison Andrianirina “Eo amin’ny fahefana vao tena afaka manao zavatra”
Anjara asan’ny eo amin’ny fitondrana ny mitady ny vahaolana hapetraka eo amin’ny firenena, hoy Filohan’ny Antoko RDS (Roso ho amin’ny Demokrasia Sosialy), Fetison Andrianirina tamin’ny fakan-kevitra natao taminy manoloana ny fahasahiranam-bahoaka ankehitriny.
Taratasin’i Jean Manao ady mitsatsaka
Miarahaba anao aho ry Jean amin’izao tsingerintaonako izao. Isaorako hatrany ianao na dia tsy mba tazako tety amin’ity toerana mba navelanao hifalianay mianakavy kely ity aza e !
Kaominina Ankiranomena Mandeha ny asa, mandroso ny tanàna
Nivoaka tamin’ny fahanginana Randrianaivoarison Jaona ben’ny tanànan’ny kaominina ambanivohitra Ankiranomena any amin’ny faritra Bongolava manoloana ny fanaratsiana mahazo azy mandeha be eto an-drenivohitra.
Mitombo isa hatrany ny olona naiditra hopitaly vokatry ny fihinanana Sardines misy poizina tao Antsiranana. Valo, raha araka ny tarehimarika ofisialy,
Antenimieran’ny varotra Atsinanana Hatao ny zoma ny fifidianana
Tao anatin’ny 8 volana, nanomboka ny volana aprily nitsanganan’ny komity manokana mpikarakara ny fifidianana vaovao eo anivon’ny antenimieran’ny varotra atsinanana,
Miss Madagascar andiany faha-4 Amin’ny zoma alina ny dingana famaranana
Tonga amin’ny dingana famaranana ankehitriny ny Miss Madagascar andiany fahefatra. Hotontosaina amin’ny zoma 15 desambra ho avy izao etsy amin’ny Hotel Carlton Anosy ny famaranana ny hetsika, handraisan’ireo tovovavy miisa 16 anjara.